1. လက်နက်များ၊ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊စစ်ဘက်သုံးနည်းပညာများ၊ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ ၎င်းတို့အတွက် ထုပ်ပိုးသည့်ပစ္စည်းများနှင့်စက်ကိရိယာများ၊သေနတ်များနှင့် အမဲလိုက်ပစ္စည်းများအပါအဝင် လူသုံးကုန်လက်နက်ပစ္စည်းများ( အမဲလိုက်ဓားအပါအဝင်)၊ pneumatic အမဲလိုက်သေနတ်၊ strikeballသေနတ်၊ paintball သေနတ်၊စသည်များအပြင် ၎င်းတို့အတွက် ထုပ်ပိုးသည့်ပစ္စည်းများ၊လက်နက်များစုဆောင်းမှုကိုကူးယူထားသည်များ၊ ဓားများ (မီးဖိုချောင်သုံးဓားများ၊ဓားမြှောင်များ၊ရုံးသုံးဓားများမှလွဲ၍) ။
2. ပေါက်ကွဲစေတတ်သောဓာတ်ပစ္စည်းများ၊ ဖောက်ခွဲရေးဓာတ်ပစ္စည်းများမှအကြွင်းအကျန်များ၊ ဖောက်ခွဲရေးနည်းလမ်းများ။
3. အဆိပ်သင့်ဓာတ်ပစ္စည်းများ၊၎င်းတို့ကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုအတွက်ကာကွယ်ရန်သုံးသည့် သတ်မှတ်ထားသည့်နည်းပညာစာရွက်စာတမ်းများ။
4. ဒုံးပျံလောင်စာအမျိုးအစားအားလုံး၊၎င်းတို့ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်အထူးလိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်ကိရိယာများ၊စစ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ဖြစ်စေအထူးကိရိယာပစ္စည်းများ၊နှင့် ၎င်းတို့ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်အသုံးချရေးအတွက်လိုအပ်သည့်သတ်မှတ်ထားသော နည်းပညာထုတ်ကုန် များ။
5. ဓာတ်မှန်စက်ကိရိယာများ၊ရေဒီယိုသတ္တိကြွဓာတ်ပစ္စည်းများ၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းအကြွင်းအကျန် များ၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဓာတ်ပစ္စည်းများနှင့်အိုင်ဆိုတုပ်များအသုံးပြုထားသည့်အသုံးအဆောင်နှင့် ကိရိယာများ၊ ယူရေနီယမ်၊နှင့် အခြားကွဲပြားသောပစ္စည်းများနှင့်အသုံးအဆောင်များ။
6. သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနရလဒ်များနှင့်ဒီဇိုင်းလက်ရာများ၊လက်နက်နှင့်စစ်ဘက်သုံးနည်းပညာဖန်တီးမှု အတွက်အခြေခံရှာဖွေရေးလေ့လာမှုများ၊လျှို့ဝှက်ကုဒ်နည်းပညာ၊ ၎င်းကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်အသုံးချမှုအ တွက်သတ်မှတ်ထားသောနည်းပညာစာရွက်စာတမ်းများ။
7. မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောပစ္စည်းများ၊၎င်းတို့၏ရှေ့ပြေးအခြေအနေများ၊ အသိစိတ်နှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောပစ္စည်းများနှင့် အဆိပ်များ။
8. ညစ်ညမ်းသောအရာများ၊ မဖွယ်မရာ၊လိင်ပိုင်းအသားပေးအပြုအမူများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်း(လိင်ဖျော်ဖြေရေးအရုပ်များအပါအဝင်)၊
10. နိုင်ငံသားများနှင့်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ဂုဏ်သိက္ခာ၊တန်ဖိုးနှင့်လုပ်ငန်းနာမည်သတင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝလျှို့ဝှက်ချက်များကိုချိုးဖောက်ထုတ်ဖော်သောအရာများ၊ အစိုးရ၊ဘဏ်သို့မဟုတ် စီးပွားရေးလျှို့ဝှက်ချက်များအကြောင်းပါဝင်နေသည့်အရာများ။
11. အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များမပါရှိသည့်အနေအထားမျိုးတွင် လိုအပ်သည့်လက်မှတ်များမပါသည့် ထုတ်ကုန်များ။
13. လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်တစ်ရှူများ သို့မဟုတ် အလှူရှင်ဝန်ဆောင်မှုများ။
14. အငှားကိုယ်ဝန် ဝန်ဆောင်မှုများ (ရှာဖွေ၊အပ်နှံခြင်း)။
15. တန်ဖိုးကြီးသတ္ထုပစ္စည်းများ၊ တန်ဖိုးကြီးရှားပါးသောကျောက်များပါသည့် အကြွင်းအကျန်များ၊ပင်လယ်ဖျံကြီးအစွယ်၊ ဆင်စွယ်များ၊ တန်ဖိုးကြီးကျောက်များ။
16. Spam ပေးပို့သည့်အချက်အလက်များ၊ လျှို့ဝှက်အပ်သည့်အကြောင်းအရာများပါဝင်သော အချက်အလက်စုများ(ဥပမာ- ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ- လိပ်စာများ၊ဖုန်းနံပါတ်၊ မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာများ၊စသည်)။
17. ဆေးရွက်ကြီး၊ဆေးရွက်ကြီးထုတ်ကုန်များ၊ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ(မီးခြစ်နှင့်ဆေးလိပ်ပြာခွက်မှလွဲ၍)၊ စီးကရက်စက္ကူများ၊ဆေးတံ၊တမာကူ၊အီးလက်ထရောနစ်စီးကရက်များ(အပိုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအပါအဝင်)၊၊
18. ဆေးပညာသုံးပစ္စည်းများ( ကုသမှုသုံးအတွင်းဝတ်ပစ္စည်း၊ဆေးအာဟာရ၊စသည်တို့အပါအဝင်)၊ ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများ၊ဇီဝနည်းပညာသုံးစွဲလမ်းစေသော့ပစ္စည်းများ၊ အားကစားသမားသုံး အာဟာရအမျိုးအစားစုံ၊ ဓာတ်ဆားဖြည့်အချိုရည်များ၊ အဆီချထုတ်ကုန်များ(ဂရင်းကော်ဖီ၊ Reishi မှိုများ၊ အပင်အာဟာရလက်ဖက်ရည်၊ ဓာတ်စာအားဆေး စသည်)၊ ဗီတာမင်ဆေးများ၊ ဆေးဝါးထုတ်ကုန်များ၊ဆေးဘက်သုံးကိရိယာပစ္စည်းများ၊မျက်ကပ်မှန်များနှင့် သိမ်းဆည်းသည့်ဆေးရည်များ၊ botox ပြင်ဆင်မှုများ၊
19. အကြမ်းဖက်နှင့်တရားမဝင်နည်းလမ်းများကို လမ်းကြောင်းပေးသည့်အချက်များပါဝင်သောကြော်ငြာ များကို ထုတ်ပြန်ဖော်ပြခြင်းမပြုရန်တားမြစ်ထားသည်။ ပြည့်တန်ဆာအလုပ်၊ နိုင်ငံရေး၊လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ကျား/မခွဲခြားခြင်း၊နှင့်အခြားအရာများအရ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ စော်ကားသည့်ဖော်ပြ ချက်များ(လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေးအပါအဝင်)၊နှင့် လိမ်လည်ခြင်းနှင့် ခြိမ်းခြောက်ငွေညှစ်ခြင်း။
20. Forex ကဲ့သို့ အွန်လိုင်းဈေးကွက်များအပါအဝင် ငွေကြေးလဲလှယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ
21. ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၏ဥပဒေအရ ဖြန့်ချိရောင်းချခွင့်တားမြစ်တားသော သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ။
ဆိုက်၏စီမံသူများသည် အသုံးပြုခွင့်တားမြစ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများ/ဝန်ဆောင်မှုများစာရင်းကို ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခြင်း ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။